ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ကိုဇော်ရဲတင်ပေးတဲ့ အောင်မင်းပုံပြင်...
သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း မြောက်ပိုင်းအေဘီအက်ဒီအက် မှာ တကယ်တော့ တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်းအား ဟာ ၃ ယောက်ဘဲရှိပါတယ်တဲ့ .... မြန်မာရာဇ၀င်ထဲ က ညောင်ဦးဖီး ရယ် ငထွေးရူးရယ် ငလုံးလက်ဖယ် ရယ် သူတို က စစ်သည်အင်းအား ၃ သိန်း နဲ့ ညီတယ်ဆိုဘဲ သမိုင်းထဲမှာ သင်ခဲ့ရတာတွေ ကို ပြန်သတိယ လာတယ် — with D Nyein Lin, Min Min Aung, Min Htay and 47 others.
သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း မြောက်ပိုင်းအေဘီအက်ဒီအက် မှာ တကယ်တော့ တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်းအား ဟာ ၃ ယောက်ဘဲရှိပါတယ်တဲ့ .... မြန်မာရာဇ၀င်ထဲ က ညောင်ဦးဖီး ရယ် ငထွေးရူးရယ် ငလုံးလက်ဖယ် ရယ် သူတို က စစ်သည်အင်းအား ၃ သိန်း နဲ့ ညီတယ်ဆိုဘဲ သမိုင်းထဲမှာ သင်ခဲ့ရတာတွေ ကို ပြန်သတိယ လာတယ်
Nweni Tun မေးတဲ့သူက သမိုင်းမသိလို့နယ်မြေတွေဘာတွေလျှောက်မေးနေတာပါ.. ABSDF ဆိုတာ ၈၈၈၈ အရေးအခင်းကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော်ဆိုတာ မလေ့လာထားခဲ့ဘူးလို့ .. ဦးအောင်မင်းဖြေထားတဲ့အဖြေ တချို့ က လက်တွေ့ ကျပါတယ်..
Thursday at 6:36am · 1
Tamar Khin သူတို့ပြောမှပဲ ကိုအောင်ဆွေဦး၊ ဆရာဘောက်ကွေး၊ အာတီစိုးတို့ ရှမ်းစပ်တဲ့ ရဲမေ မေမြင့်တောင် ကချင် ဖြစ်သွားရတယ်၊
Thursday at 6:36am · 2
Zaw Ye Nweni Tun ပထမတစ်ပုံ ပြောထားတာကြည့်လိုက် ပြောတာ က ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ကိုင် နယ်မြေ ကိုမေးထားတာပါ အခြေခံဒေသ ကို
Thursday at 6:39am
Nweni Tun ပထမပုံမှာ ကွန်မန့် ရေးမလို့ လုပ်နေတာ.. ဒီလအတွင်းမှာ ခနခန ဟာသ ကားတွေကြည့်နေရတယ်လို့ ပြောမလို့ ..တို့ တွေ ကို ရယ်မောချင်းသည် ကျန်းမာနုပျိုစေသည်ဆိုတဲ့ အတိုင်း အသက်ရှည်စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့အဲလို ဟာသတွေပြောပြောနေကြတာဖြစ်မယ်..။
Thursday at 6:45am · 1
Ssi Las အောင်မင်းကတော့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်စ်ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်မရဘူးလို့ပြောနေပြီ
Thursday at 8:24pm · 1
Hmone Shwe Yi အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ-
Thursday at 6:03am · 2
Zaw Ye ငုံ နောက်တစ်ပုံမှာဖတ်ကြည့် Hmone Shwe Yi
Thursday at 6:08am
Kayin Lay အဲ့ဒါ သမတရုံးက ဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားပါ။ ခုတ လော မှတ်သားလောက်ဖွယ် ရာစကားများကို အစိုးရဆိုသူအးများထံမှ ကြားနေရပါတယ်
Thursday at 6:09am via mobile · 4
Zaw Ye Kayin Lay စိုးစိုး မင်းနဲ့ Cleveland ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ တဲ့ ထိုင်းအမျိုးသမီး ဒီနေ့ ဘဲ ဆုံးသွားတယ်
Thursday at 6:15am
Kayin Lay please pass my condolence for her family
Thursday at 6:17am via mobile · 1
Thursday at 6:36am · 4
Htay Thanhtwaykyu တလောတုန်းက နန်းအောင်ထွေးကြည်နဲ့ ဘီဘီစီလား အင်တာဗျူးမှာအဲဒီနည်းလည်းကောင်းပဲပြောသွားတာ
Thursday at 3:04pm · 3
Aung Htun တူရာစုကြတာထင်တယ်..
Thursday at 5:31pm · 1
Skyheart Winko ဟား ဟား ဟား ရီစရာတွေသိပ်မတင်ပါနဲ့နော် ထမင်းမစားနိင်မှာ စီုးလို့ပါ.....
Aung Tha Nge Zaw Ye မင်းတို့ကလည်း ခက်တယ်... နောက်ထပ် ၂ ယောက်လောက် မပ-ကို ပို့လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ... ခုတော့ သူများ အပြောအဆို ခံရပြီ...
Zaw Ye Aung Tha Nge ရယ် Ko Linရယ်ပို့လိုက်မယ်လေး ဟိဟိ
Tamar Khin စစ်သည်တော် ၄ သိန်းပါ သူငယ်ချင်းရယ်။ အင်အားကသာ အဓိကကျရင် ဗြိတိသျတွေရဲ့ နေမ၀င် အင်ပိုင်ယာကြီးကို ဘယ်သူဖြိုရဲပါ့မလဲ၊
Thursday at 7:29am · 6
Moe Kyaw Oo ဇော်ရဲက ၀ါသနာထုံတယ်နော်။ အရှည်လိုက်သတင်းစာကို ဖြတ်ပြီးတော့ အပိုင်းလိုက်ပြန်တင်ထားတယ်
Thursday at 7:56am · 1
Nicky Shein စစ်သည်တော်ကြီး လေးသိန်း ဟုတ်စ တမာခင် ? မျိုးဝင်း၊ သံချောင်း၊ လှဆိုင်းနဲ့ အောင်နိုင်တို့ များလား ? တန်ရာ တန်ရာ နှိုင်းပါကွယ်၊ ဟိုက ပုဂံ က စစ်သည်တော်ကြီး လေးဦး၊ ငထွေရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ကျန်စစ်သားနဲ့ ညောင်ဦးဖီး၊ မင်းပြောချင်တဲ့ စစ်သည်တော်ကြီး လေးသိန်း က ကိုယ့်ရဲမက်ချင်း အကောက်ကြံတဲ့ အယုတ်တမာခင်တွေ၊ မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း မြေမြီုမယ်။
Thursday at 8:09am · Edited
Oung K Nai ခင်ဗျာပါထည့်လိုက် ၅ သိန်းဗျာ...... ထင်ကျော်ထက်
Thursday at 8:18am · Edited · 1
Thet Win Nicky Shein-မင်းပါးစပ်ပိတ်ထားရင်ကောင်းမယ်-မင်းမြောက်ပိုင်းအကြောင်းဘယ်လောက်သိလို.လဲ-
Thursday at 1:43pm · 1
Kayin Lay လိမ္မာတခါမိုက် တကယ်သိသိနဲ့ ရွှီးမိသူလေးမို့ခွင့်လွတ်မူပါ။
Thursday at 2:14pm via mobile
Nicky Shein မြောက်ပိုင်းအကြောင်းတော့ သေခြာမသိဘူး၊ မြောက်ပိုင်းက မဟုတ်တာ လုပ်တဲ့ကောင်တွေအကြောင်းတော့ ကောင်းကောင်းသိတယ်၊ ပိတ်ရမှာ မင်းပါးစပ် Thet Win ၊ ငါ့ပါးစပ်ပိတ်ထားစေချင်ရင် မင်းတို့ လူသတ်သမားတွေရဲ့ ပါးစပ်တွေအရင်ပိတ်ထားပြီးမှပြော နားလည်လား?
Thursday at 2:27pm · Edited
Zaw Ye Moe Kyaw Oo ခင်ဗျာတင်ထားတာ မှ ဖတ်လိုမရတာ ဗိုလ်ကျောက် ရဲ့ ၀ါသနာပါမှပေါ့ ပချာအူထစ် ရုံးက လူတွေသင်ပေးလိုက်တာလေ
Thursday at 3:07pm · 1
Htay Thanhtwaykyu ဒါဆိုရင် nicky shein က အဲဒီဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံတယ်ပေါ့ ခုနကလေးယောက်တည်း အေဘီမှာရှိတယ်လို့
Thursday at 3:08pm
Zaw Ye Tamar Khin မလိူင် ရဲ့ အောင်မင်းပြောတဲ့ အတိုင်းကို ပြန်ပြင်လိုက်တာလေ ဟိဟိ
Thursday at 3:10pm · Edited
Nicky Shein လက်မခံပါဘူး၊ အောင်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကို ဘယ်တော့မှ လက်မခံဘူး၊ အေဘီကို လေးစားတယ်၊ လူသတ်ကောင်တွေကို ကာကွယ်ပြောနေတဲ့သူတွေကိုလဲ မုန်းတယ်။
Zaw Ye ကိုNicky Shein ရ ကျနော်သဘော အရ ဘယ်သူမှ တာဝန်မဲ့စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သူတွေ ခင်ဗျာမှလည်းမဟုတ်ဖူး အေဘီ ရဲဘော်ဟောင်းတွေကော အေဘီ ကို သံယောဇဉ် ရှိခဲ့သူတွေ ပါလက်ခံမှာ မဟုတ်ဖူးဆိုတာ ခင်ဗျာကော ကျနော်ကောသီပြီးသာဘဲ လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ သူ့တရားသူစီစဉ်လိမ့်မယ် ကျနော်ဖြစ်စေချင်တာ က ၁ယောက်၂ယောက် နြဲ့ပီးရမဲ့ မဲ့ ကိစ္စ ဘယ်သူ့တွေ က လက်မဲကြီးတွေ နဲ့ နောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်းခဲ့တာ ကိုလည်းသီဖို့လိုတယ် ဒီလို လူ ငါးဆယ်လောက်ကို တရားခံဖြစ်အောင် အသတ်ခံရအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ လဲ အသားအနားခံရလို့ပြောမီပါတယ် ၊ကိုယ့်လွှတ်မလားလို ဆွဲထည့်ရပါတယ် ဆိုတာလဲ အဓိပ္ပါယ် မရှိဖူး ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မသိလိုလုပ်ရပါတယ် ဆိုတာ ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေ မရှိဖူး ဒါကြောင့် ဒီလူတွေ ကို လူသတ်ခဲ့သူတွေ နည်းတူကြိုးစင် ပို့ရမယ် လို ကျနော်ကမြင်တယ် ရှင်းတယ် ကျနော်တို့ အချင်းချင်းသွေးကွဲနေကြတာ မပ ကိစ္စ နဲ့ စစ်အုပ်စုကတော့ပျော်နေမှာပေါ့ ဒါကြောင့် အေဘီ နဲ့ဆွေးနွေးတာ ကို လက်နက်ဘဲချခိုင်းနေတာပေါ့ ကိုယ်ဖက်မှာမှ အင်းအားမှ မရှိတာ ဒါကတော့ ကျနော်မြင်တဲ့သဘောထားပါ
Thursday at 3:26pm · 6
Nicky Shein ဇော်ရဲရေ ဆွေးနွေးရတာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်၊ ခုတော့ အလုပ်သွားရတော့မှာမု့် နောက်နေ့မှ ပြန်ဆွေးနွေးပါ့မယ်၊ ကျေးဇူးပါ
Thursday at 3:30pm · 1
Kayin Lay ကိုဇော်ရဲပြောတာ သဘာဝနဲ့ သမာသမတ်ကျပါတယ်... ဒီကျယ်ပြောနက်နဲလွန်းတဲ့ကိစ္စကြီးဟာ သွေးရိုးသားရိုးဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး. ဒီထဲမှာ အပြစ်မဲ့သူတွေကို ဆွဲထည့်သွားကြာတာဟာ ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ သော့ချက်တခုကြီးပါပဲ။ whyဘာ ကြောင့်လဲ ပြီးတော့ကော ဘာဖြစ်လဲ so what ပေါ့.. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကျနော်တို့ ရဲ့ မြောက်ပိုင်းက စည်းကမ်းအမိန့် ကို နာခံတတ်ကြတဲ့ ..တိုက်ရဲခိုက်ရဲတဲ့...ရဲဘော်ရဲမေချင်း ညီရင်းကိုလိုချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်နဲ့ ရဲမေများ မာယာကျော့ကွင်းထဲ လှည့်ကစားတဲ့ထဲပါသွားခဲ့ကြရတော့တာပဲ..ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဟာ ကျနော့်မျက်စိရှေ့ မှောက်မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် တစိတ်ပိုင်းကို သိခွင့်ရှိခဲ့တယ်။ ထူးခြားစွာပဲ ကျနော်ခင်မင်တဲ့ရဲဘော်နစ်ယောက်နဲ့ထိမ်းသိမ်းခံရစဉ် လွတ်လပ်စွာစကားပြောခဲ့ဘူးတယ်။ ကျနော်ဟာ စစ်ကြောရေးအဖွဲ့ ကမဟုတ်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးယူပေးရတဲ့တာဝန်ပဲ၇ှိပါတယ်..အဲ့ဒီအခါ အထက်ကနစ်ယောက်ကို စကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ကြရတလဲလို့ ပေါ့ဗျာ..။ နစ်ယောက်စလုံးက သူတို့ ဖြစ်စဉ်ကိုဖြေကြတယ်.. ညီရင်းအကိုလို အရင်လိုပဲပြောခဲ့ကြတာပါ... ဒါပေမယ့် သူတို့ ရဲ့ အဖြေက စစ်ကြောရေးကိုပြောခဲံတဲ့ အဖြေနဲ့ တူမတူဆိုတာတော့ ကျနော်မသိပါဘူး။ ဆင်တူရိုးမှားလေးတော့ရှီပါတယ်။ ပိုထူးဆန်းတာက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေရဲ့ ထွက်ချက်တွေက ဇတ်တိုက်ထားသလိုတော့ရှိတယ်..အားလုံးနီးပါးက ဆင်တူရိုးမှားတွေဖြစ်နေတယ်..လိုင်စင်ဗဟိုကတယောက်ဖြေတာနဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ခရိုင်ကရဲဘော်တယောက်ဖြေတာဟာ ဘာကြောင့်များ ဆင်တူရိုးမှာဖြစ်နေပါလိမ့်။ ကျနော်မသိ။
Thursday at 6:05pm · Edited · 4
Kayin Lay နစ်ကီက လူသတ်ကောင်လေးယောက်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီ လေးယောက်ပရိုဖိုင်း ဒေတာကိုလက်ဝယ်ပိုက်ထားတာလား.. ဟိုလေးယောက်က ကချင်ပြည်နယ်ကနော်. ခင်ဗျားက ဘယ်ကလဲ... တကယ်ကောင်းကောင်းကြီးကိုသိတယ်ဆိုတယ်လို့ တတ်အပ်မတ်အပ်ကြီးပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့......၀ါးချရင်တော့ သားသားတို့ မကြိုက်ဖူးနော်...
Thursday at 6:11pm · Edited · 4
San Dar ကျနော်တို့ အချင်းချင်းသွေးကွဲနေကြတာ မပ ကိစ္စ နဲ့ စစ်အုပ်စုကတော့ပျော်နေမှာပေါ့(Zaw Ye)
Thursday at 6:12pm · 7
Kayin Lay မစန္ဒာရေ..အမှန်ပဲပေါ့..ပျော်ယုံတင်မကဘူး ခွက်မြောက်ပြီး ချီးယားစ်တောင်လုပ်နေအုံးမယ်
Thursday at 6:16pm · 5
Thursday at 6:17pm · 6
Thet Win Nicky Shein-မင်းကမြောက်ပိုင်းကကောင်တွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတဲ.စကားကတော.တော်တော်ရီရတဲ.ပျက်လုံးဘဲ-မင်းသူများတဖက်သတ်ကိုယ်လွတ်ရုံးပြီးပြောသွားတဲ.သူစကားအားလုံးအမှန်လို.ထင်နေတာတော.တော်တော်လေးကိုရှုးတာဘဲ-မင်းတို.တောင်ပိုင်းကလူတွေအကြောင်းတောင်မင်းအားလုံးသိနိုင်ပါ.မလား-ငါကဘယ်ကောင်မှကာကွယ်နေတဲ.လူမဟုတ်ဘူး-
Thursday at 7:24pm · Edited
Zay Latt thit win say good.i'm zay latt!
Thursday at 8:10pm · 2
Ssi Las အောင်မင်းကတော့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်စ်ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်မရဘူးလို့ပြောနေပြီနော်...
Thursday at 8:26pm · 2
Min Min Aung ရယ်ရတယ်နော်.... ၃ ယောက်ပဲရှိတာကိုတောင် မဖြိုခွဲနိုင်တာ..ဘယ်သူညံ့လို့လဲ လို့...သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်
Yesterday at 5:09am · 5
Tamar Khin ကျမက ကိုဇော်ရဲ တသိန်းလျော့ထားတာကို ပြောနေတာ၊ နိုင်းယှဉ်ပြောတယ် ထင်ရအောင် သကဲ့သို့ ။ ကဲ့သို့ ဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးရေးထားခဲ့လို့လား၊ နစ်ကီဆိုတဲ့ လူက စာဖတ်တတ်ရဲ့လား၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆွဲတွေးပြီး ရေးနေပြီးတော့၊
Khin Maung မလိုပါ ပြည့်စုံလာလိမ်မယ်။ အမှန်တရားအတွက်။
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:39 AM